Madaxweyne Farmaajo oo baajiyay kulan uu la yeelan lahaa Wakiilada Beesha Caalamka - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweyne Farmaajo oo baajiyay kulan uu la yeelan lahaa Wakiilada Beesha Caalamka
Madaxweyne Farmaajo oo baajiyay kulan uu la yeelan lahaa Wakiilada Beesha Caalamka
Madaxweynaha dowladda Federaalka Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa shalay baajiyay kulan uu Madaxtooyada Villa Somalia kula yeelan lahaa Wakiilada Beesha caalamka ee fadhigooda yahay Muqdisho.
Kulankan oo ahaa mid la sii ogaa labadii maalmood ee la soo dhaafay oo balantiisa aheyd mid qorsheysneyd ayaa Madaxweynuhu go’aansaday xilli dambe inuu baajiyo kulanka.
Wararka ayaa sheegaya in shirkaas looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka in waqtigooda ku dhacaan, xiisada Gobolka Gedo ee xuduuda, khilaafka Dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada sidii is faham looga gaari lahaa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xubnaha Beesha Caalamka ee shirkaas ka qeyb geli lahaa ay Madaxweynaha u wadeen farriin ku saabsan sidii dowladda u wajahi laheyd howlaha horyaala, maadaama dalku geli doono kala guur lixda bilood ee soo socda oo dowladdu muddo xileedkeeda soo yaraanayo.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb geli lahaa Safiirada dalalka Midowga Yurub, UK, Wakiilka Qaramada Midoobey iyo wakiilo kale.
Maalmihii u dambeeyay wakiilada Beesha caalamka ayaa war ka soo saarayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka, iyadoo u dambeeyay war saxaafadeed maalin ka hor ka soo baxay Midowga Yurub oo looga hadlayay xaaladaha amni ee ka jira Galmudug iyo Jubbaland.